Sidee Xiriirku U Wadaa Dakhliga Webinar ee Dakhliga | Martech Zone
Arbacada, Juun 27, 2012 Axad, Maarso 24, 2013 Jenn Lisak Golding
Intii lagu jiray bishii Juun, saaxiibbaday iyo macaamiishayda, Right On Interactive iyo TinderBox, waxay ku biireen xoogag si ay u abuuraan wax cajiib ah taxanaha webinar ku saabsan sida cilaaqaadyadu u wadaan dakhliga. Xuquuqda Interactiveive, kafaala qaadka ah Martech Zone, waxay siisaa a xal otomaatiga suuq geynta iyadoo diirada la saarayo guuleysiga, ilaalinta, iyo xiriirka sii kordhaya. TinderBox waa SaaS soodhawaynta iibka softiweerka taasi waxay fududeyneysaa sameynta warbaahin fara badan, soo jeedin iibsi oo isku dhafan oo rajadaada ah. Labaduba waxay leeyihiin aragti yaab leh oo ku saabsan suuqgeynta iyo warshadaha iibka, oo ay ku wadaageen taxanahan webinar.
Kani waa taxane 3 qaybood ah, oo diirada lagu saarayo qaybaha kala duwan ee wareegyada suuqgeynta iyo iibinta 30 daqiiqo oo webinar ah. Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee laga qaato fadhi kasta, laakiin waa inaad xaqiiqdii tahay dhagayso taxanaha inaad waxbadan ka barato! Waxa kale oo aad kala socon kartaa wadahadalka barta Twitter-ka #revwebseries hashtag.
Qeybta 1: Rinjiyeynta Sawirka Rajadaada
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah qodobbada doodda iyo waxyaabaha laga qaato websaydhkan:
Qofka ay tahay inaad waqtigaaga ku bixiso inaad lahadasho
Ansixinta tiknoolajiyadda otomatiga ee suuqgeynta ayaa la filayaa inay kordho 50% marka la gaaro sanadka 2015. ” (Go'aannada Sirius)
50% hogaamiyaasha u qalma diyaar uma aha inay isla markiiba iibsadaan. ” (Gleanster)
Ka wareejinta shirkadda oo kuu sheegaysa waxa dhibaatadaadu tahay inay kaa caawiso xallinta dhibaatooyinka aad soo ogaatay
Sidee ku helitaanka macdanta "lead" ay uga badan tahay rajada
Tayada ka badan tirada (horseedka)
Abuuritaanka isgaarsiin ku habboon, xiriir la leh
Qirashada dhammaan ilaha hoggaanka ee beddelaad badan
Tabaha ku saabsan sida loo bilaabo (yoolalka, astaamaha macmiilka, hogaaminta ganacsiga)
Halkan Ka Dhageyso Qeybta 1aad.
Qeybta 2: Dhibcuhu wuxuu sheegayaa sheeko
Ka hadalka isku toosinta iibka iyo yoolalka suuq geynta
Hubso in gacan-ku-haynta ay si siman oo hufan waxtar u leedahay
47% ka mid ah suuqleyda B2b ayaa sheegaya in ay xidheen wax ka yar 4% dhamaan hogaaminta suuq geynta, ama xitaa ma yaqaaniin qiyaastan. ” (Cilmi baarista Forrester)
"Dadku waxay u badan tahay inay 12% wax kaa iibsadaan haddii aad abuuri karto xiriir shucuur leh." (Gallup Poll)
"Sanadka 2020, macaamiisha waxay maamuli doonaan 85% xiriirkooda iyagoon lahadlin qof bini aadam ah." (Cilmi baarista Gartner)
U adeegsiga dhibcaha si loo aqoonsado loona qalmo gudaha
Dhibcaha waa inay u dhigmaan noocyada kala duwan ee xiriirka
Marxalad kasta waa in loola dhaqmaa si ka duwan
Lambarradu waxay siinayaan aragti sheekada oo dhan - meertada nolosha xiriirka
Halkan Ka Dhageyso Qeybta 2-aad.
Qaybta 3: Aynu Shaqsi Noqno
"B2B iibsadayaashu waa sida ugu badan ee 70% iyada oo loo marayo nidaamka iibsiga ka hor inta aan lala xiriirin iibiyaha." (Go'aannada Sirius)
Isku waafajinta qalabka xiriirka
Isaga oo ka hadlaya gacan yaraanta bilaa sumad la'aanta ah laga bilaabo suuq geynta ilaa iibinta
Ixtiraam, tixgelin, jawaab celin
Soojiid, Kori, Beddel (iibka / masafka suuqgeynta iyo sida ay isu beddelayaan)
Khibrad dhammaystiran oo loogu talagalay macaamiisha
Adeegsiga tikniyoolajiyadda si aad isugu xirto qaran ahaan iyo gudaha
Xogta ayaa waddo beddelaad
Heshiisyadu way xirmaan xiriirkooda dartiis
Kula hadal masrax
Waqti aad kuhesho shakhsi ahaaneed waxay qaadataa 70% habka loo maro
Waqti qaado oo dhagayso tan run ahaantii cajiibka ah taxanaha webinar - kama qoomameyn doontid!
Tags: isgaarsiintamarketingSuuqgeynta WebinarRelationshipsDakhligasaxda ah is-dhexgalkaKordhinta Iibkasantuuqa
Wax kasta oo iga caawin doona inaan barto cusub
arrimuhu waa soo dhaweyn aad u badan. Aad ayaan u faraxsanahay
inaad la wadaagtay macluumaadkan. Aniga
hubaal waa iska hubin doonaa. Waxaan kaaga mahad celinayaa
At SukritInfotech, waxaan hubineynaa in ujeedooyinkaaga joogitaanka websaydhka gebi ahaanba lagu xalliyo adeegyadayada wareegga buuxa. Adeegyadeenu waa kuwo khuseeya laakiin aan ku xaddidnayn horumarinta softiweerka, xalalka shirkadaha ku saleysan websaydhka, dalabka websaydhka, iyo bogga Horumarinta Webka Iyada oo la adeegsanayo geedi socodka wareegga buuxa ee macaamiisha iyo khibrada domain ee adag, xooggeenna hibada leh iyo kuwa tababaran waxay ku bixiyaan mashruuc kasta waqtigiisa inkastoo cabirka iyo kakanaanta.